တရားဝင် Honor 9X နှင့် 9X Pro တို့၏ပြန်ဆိုမှုများသည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည် Androidsis
နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် ဂုဏ်အသရေ 9X Pro ကို။ ၎င်းသည်၎င်း၏နောက်ဘက်အပိုင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်လိုက်လိုက်ဖက်သောသုံးဆကင်မရာသည်၎င်း၏ဘယ်ဘက်အထက်ထောင့်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းကဖုန်းတွင်နောက်လက်ဗွေဖတ်ကိရိယာတစ်ခုမပါ ၀ င်ဘဲ screen အောက်တွင်ပေါင်းစပ်ထားကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်အားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလယ်အလတ်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အလယ်အလတ်တန်းစားကိုမျှော်လင့်သည်။ ဒါပေမယ့်ကော ဂုဏ်အသရေ 9X?
ဒီနှစ်ရှည်လများစောင့်စားခဲ့တဲ့ဒီနှစ်လုံးရဲ့စံပုံစံကအဆင့်မြင့်မော်ဒယ်လ်ထက်ပိုအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်မှယိုစိမ့်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထားပြီးဖြစ်သော်လည်းယခုအချို့နှင့်သင်အားလုံးကိုသင်၏အတည်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုသည် Official render သည်ပေါ်လာသည်။ သို့သော် 9X Pro နှင့်အတူတူမပြုလုပ်ပဲမရ, အရာဖျောပွပြန်ဆို image ကိုပြသအရာအားလုံးကိုကိုင်ရန်ကြွလာ။
ဒီတော့ Honor 9X နဲ့ 9X Pro တို့ပါ
ဂုဏ်ပြု 9X Pro ကိုအရာရှိတ ဦး ကဆပ်
ဂုဏ်ပြု 9X အရာရှိတ ဦး ကဆပ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Honor 9X ၏ rendering အသစ်အကြောင်းစတင်ပြောဆိုသွားမည်။ ၎င်းက terminal သည် Honor 9X Pro ရှိ module နှင့်တူညီသောနောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်ကိုအတည်ပြုသည်။ သို့သော်ဓာတ်ပုံစနစ်၏အိမ်သည်ယန္တရား၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းတွင် LED flash ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်ုပ်တို့သည် device ကိုသယ်ဆောင်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည် ဖန်သားပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေဖတ်စက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမင်းရဲ့နောက်ဘယ်နေရာမှာမှမရှိဘူး၊ ဤဖော်ပြချက်သည်သူ၏အစ်ကိုနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
လက်ကိုင်ဖုန်းနှစ်ခုလုံးရဲ့ရှေ့ဖက်မှာအနိမ့်အမြင့်၊သောအကြံပြုထားသည် selfie ရိုက်ကူးရန်အတွက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်အတွက်ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်, မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ပိုပြီး။ ဖန်သားပြင်များကိုဝိုင်းရံထားသည့် bezel များသည်အလွန်သေးငယ်သော်လည်းအခြားတစ်ခုသည်မနိမ့်ပေ။
AnTuTu စမ်းသပ်မှုများက Kirin 810 သည် Honor 9X တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ကိုအတည်ပြုသည်
ဒီစမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကတစ်ယောက်တည်းမလာခဲ့ပါဘူး။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် MySmartPrice မှဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများအား terminal တစ်ခုချင်းစီ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်ကပြောပါတယ် Honor 9X Pro သည် ၆.၅၉ လက်မမျက်နှာပြင်ကို FullHD + resolution ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်9X မှာသေးငယ်တဲ့တစ်ခုရှိမယ်။ Android 9.1 Pie ကို အခြေခံ၍ EMUI9ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ၃၉၀၀ mAh စွမ်းရည်ရှိသည့်ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားသည်။
El 810အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြုလုပ်ပုံရသည် ဟုတ်ကဲ့ဒါနှစ်ခုဆိပ်ကမ်းများတွင်အကောင်အထည်ဖော်နေသည်. Pro ဗားရှင်း၏သုံးဆကင်မရာသည် ၄၈ MP၊ ၈ MP နှင့် 48 MP အာရုံခံကိရိယာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်သည်နှစ်ဆဖြစ်သောစံဗားရှင်းတွင် ၄၈ MP မူလအာရုံခံကိရိယာနှင့်အလယ်အလတ် ၂ MP resolution ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ သတိရပါ ဇူလိုင်လ 23 ရက်နေ့တွင်သူတို့စတင်ပါလိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Honor 9X နှင့် 9X Pro တို့၏ဗေဒကိုသူတို့၏တရားဝင်ပြန်ဆိုချက်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်
Realme 3i: အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်